The March New Trade Ememme-News Center-NINGBO SUNSOUL UTgbọala ngwa mma CO., LTD
Festivalbọchị ahia ahia ohuru nke March
March bụ mmalite nke afọ na mmalite nke ọrụ azụmahịa. Festivalbọchị ahia ohuru nke March na-elekwasị anya na "ỌH NEWR” ". Site na okike na nduzi nke ngwaahịa ohuru, onodu ohuru, oru ohuru, na ahia ohuru, ulo oru mba uwa na-aga n'ihu Mepụta ezigbo azụmaahịa na ọrụ dị mma iji nyere gị aka ijide ohere ahụ.
Alibaba International Station “March New Trade Festival” bụ ihe na-enwu gbaa maka ndị na-eweta ngwaahịa ụwa iji gosipụta ike ụlọ ọrụ ha, ngwaahịa ndị ọhụrụ na ọrụ ọhụụ, yana ohere kachasị mma maka ị nweta oke ahia
ndi oru pere mpe na ndi pere mpe. Ka ndị na-azụ ahịa ụwa na-akwadebe maka ịzụrụ kwa afọ, ha na-agba mbọ inyere ndị na-azụ ahịa aka inweta ndị ọhụụ ọhụrụ na ohere azụmaahịa, melite ọnụego mgbanwe ndị ahịa na-agbanwe, ma nyere ndị ahịa aka ịbawanye ego ha!
Omume oge ga - amalite na Machị 2nd rue Machị 31st.
Anyị akwadebela ngwaahịa ọhụrụ, ụfọdụ ngwaahịa na-enwe mbelata 5%, enwere ihe ị chọrọ！ biko pịa → https://autosunsoul.en.alibaba.com/
Previous: Obi ụtọ na Women'sbọchị Women'smụ nwanyị Mba !wa!
Ọzọ: Na-alụ ọgụ nje n'ụzọ ezi uche dị na ya